Xad-gudubka Xashiishadda ee Ku Xidhan Khatarta Sare ee Schizophrenia • Dawooyinka Inc.eu
Xad-gudubka Xashiishadda ee Ku Xidhan Khatarta Sare ee Schizophrenia
Daraasad cusub oo laga sameeyay Danmark ayaa lagu ogaaday inay sii kordhayso isku xirnaanta dhibaatooyinka, isticmaalka xashiishadda ee xad dhaafka ah iyo kiisaska shisoofrani
Cusub daraasadda laga bilaabo Denmark waxay muujisay in 25-kii sano ee la soo dhaafay, tirada kiisaska shisoofrani ee lala xiriirinayo isticmaalka xashiishka ay kordheen: halka kaliya 2 boqolkiiba baaritaannada shisoofrani ee 1995 ay xiriir la leeyihiin isticmaalka marijuana, illaa 2010 tiradaas ayaa kor u kacday illaa 8 boqolkiiba.
Qorayaasha daraasaddan, oo lagu daabacay Arbacadii joornaalka JAMA Psychiatry, waxay rumaysan yihiin in natiijooyinkoodu ka turjumayaan in xashiishadda, in kasta oo ay sumcad wanaagsan ku leedahay daroogooyinka kale ee madadaalada, ay khatar noqon karto oo ay yeelan karto waxyeelo caafimaad oo daran.
Si loo gaaro gabagabadan, waxay falanqeeyeen macluumaad tobanaan sano ah oo laga helay Diiwaanka Caafimaadka Qaranka ee Danmark, oo lagu bartilmaameedsaday dadka isticmaala xad dhaafka ah. Isticmaalka madadaalada ee xashiishku waa ka mamnuuc Danmark.
Cannabis ma u horseedi kartaa shisoofrani?
Cannabis-ka ayaa loo arkaa inuu yahay walax aan waxyeello lahayn. Tani waa nasiib darro, maadaama aan aragno isku xirnaanshaha shisoofrani, garashada garashada oo liidata, cilladaha isticmaalka maandooriyaha, ”qoraaga daraasadda ahna borofisar ku xeel dheer ayaa u sheegay wargeyska. Xarunta Cilmi-baarista ee Caafimaadka Maskaxda ee Copenhagen Carsten Hjorthøj email ahaan ugu dir CNN. - Waxaan qabaa, inay aad muhiim u tahay, in la isticmaalo cilmibaaristayada iyo daraasado kale, in la adkeeyo in isticmaalka xashiishku aanu dhib lahayn.
Waa la ogyahay in dadka isticmaala xashiishka ay u badan tahay inay ku dhacaan shisoofrani, laakiin cilmi baarayaashu waxay aaminsan yihiin in natiijooyinkooda ay muujinayaan in dhibaatadu ay kasii dareyso oo ay sii kordheyso. - Dabcan, natiijooyinkayagu waa in lagu soo celiyaa meelo kale ka hor inta aan go'aanno adag laga soo saarin, ayay tidhi Hjorthøj. - Laakiin si kalsooni leh ayaan ugu kalsoonahay inaan ku arki doonno qaabab la mid ah meelaha dhibaatooyinka xashiishaddu ku badan tahay ay ku soo bateen, ama ay ku sii korodhay awoodda xashiishadda, maadaama daraasado badan ay soo jeediyeen in xashiishad xoog leh ay u badan tahay xididka ururka schizophrenia.
Faallooyin la socda, khubaradu waxay xuseen in inta badan baaritaanka cudurka dhimirka ee xaqiiqada looga baxo aysan sabab u ahayn isticmaalka xashiishadda. "Cilladda isticmaalka xashiishku mas'uul kama aha inta badan kiisaska shisoofrani, laakiin waxay mas'uul ka tahay saami aan la dayacin oo sii kordhaya. Tani waa in laga fiirsadaa doodaha sharciyeynta iyo sharciyeynta isticmaalka xashiishadda, ”Tyler J. VanderWeele, oo ah borofisar ka tirsan Harvard TH Chan School of Health Public, ayaa soo wariyay CNN.
Akhri wax dheeraad ah nypost.com (Source, EN)
Kordhinta Cannabis Apps: sida tiknoolajiyada marijuana isbeddeleyso warshadaha cawska
Bilihii la soo dhaafay, isbeddelada cusub ee adduunka ee dhinaca xashiishadda Apps ayaa wax ka beddelay warshadaha xashiishadda.…
Coronavirus-ku wuxuu xaqiijiyaa in haramaha badan la qiijiyo.
Qiyaastii laba-meelood laba dadka reer Holland ee sida joogtada ah u caba weed ayaa hadda si aad ah u caba dhibaatada ka dhalatay dhibaatada coronavirus ...
Sheekada dhabta ah ee ka dambeysa taxanaha Netflix 'Sida loogu iibiyo daroogada internetka'
Dhawaan taxane cusub ayaa ka soo muuqday Netflix: Sida loogu iibiyo daroogada internetka (dhakhso). Sida laga soo xigtay khubarada ...